PressReader - Ilanga: 2017-11-02 - Ibizehlisile iNkosi Khawula esikhotheme
Ibizehlisile iNkosi Khawula esikhotheme
Ilanga - 2017-11-02 - Izindaba - INTATHELI YELANGA
BABABAZE ukuzehlisa nokuthanda abantu kweNkosi Bhekamahlongwa Bhoyi Khawula (59), bonke abantu abethule inkulumo ngesikhathi inkosi itshalwa kwelakubo eMzumbe, eningizimu yeKwaZulu-Natal ngoMgqibelo esisuka kuwona.
UMntwana waKwaPhindangene, iNkosi Mangosuthu Buthelezi - inkulumo yakhe yokukhalisa umndeni weNkosi Hlongwa, efundwe yiMeya yaseMzinyathi, uMnu Petros Ngubane - ikhale ngokukhothama kwenkosi ngaphambi kwesikhathi.
Umntwana - ongenye yamakhosi ayibambe ishisa elwela isithunzi sobukhosi KwaZulu-Natal - uthe bekusekuningi isizwe ebesisazokuvuna eNkosini Khawula ezalwa yiNkosi Calalakubo Khawula (engasekho), eqale ukusebenza neNkosi Buthelezi ezindabeni zesizwe samaZulu kusuka ngasekuqaleni kweminyaka ye-1950.
UNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal, uNkk Weziwe Thusi, obebambele uNkk Nomusa DubeNcube ongungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezomdabu, udlulise ukulila kukaNdunankulu Willies Mchunu ngokukhothama kwenkosi. Wethembise ukuqhubeka nokuqinisa ukusebenza kobuholi bomdabu. Inkosi ekhothame emuva kokuhlabeka isikhashana, ishiye emhlabeni undlunkulu nezingane ezimbili, indodakazi nendodana.